तिमी एक चमत्कार हौ | प्रेरक संसार
तिमी एक चमत्कार हौ
हाम्रो जीवनका हरेक क्षण ब्रह्माण्डको एउटा नयाँ र अनौठो पल हुन् जुन फेरि फर्केर आउने छैनन् र हामीले आफ्ना बच्चाहरूलाई के सिकाउँछौ ? हामी ञीह...
हाम्रो जीवनका हरेक क्षण ब्रह्माण्डको एउटा नयाँ र अनौठो पल हुन् जुन फेरि फर्केर आउने छैनन् र हामीले आफ्ना बच्चाहरूलाई के सिकाउँछौ ? हामी ञीहरूलाई सिकाउँछौ भने दुई दुना चार हुन्छ, नेपालको राजधानी काठमाडौ हो, यस्तै ।
हामी कहिले उनीहरूलाई यो किहिल्यै सिकाउदैनौ कि उनीहरू कति अनौठा छन् ?
हामीहरूले उनीहरू सबैलाईलाई भन्नुपर्छ, के तिमीलाई खाहा छ, तिमी को हौ ? तिमी एउटा चमत्कार हौ, तिमी अद्वितीय छौ । आजभन्दा अगाडि तिमी जस्तो बच्चा कहिल्यै जन्मेको छैन । तिम्रो जस्ता हात, खुट्टा, औला, चाल, बोली आजसम्म कसैको छैन ।
तिमी शेक्सपियर, माइकल एंजेलो, विथोवन बन्न सक्छौ । तिमीमा यो क्षमता छ कि तिमी जे चाह्यो त्यो बन्न सक्छौ । हो, तिमी एक चमत्कार हौ । जब तिमी ठूलो हुनेछौ तब तिमीसँग अरू केही हुनेछ, जो तिमी जस्तै एउटा चमत्कार हुनेछ ।
तपाईहरू सबैले, हामीले मेहेनत गर्नुपर्नेछ ता कि यो दुनियाँ बच्चाहरू बस्न योग्य बनोस् ।
- पाब्लो केसल्स
प्रेरक संसार: तिमी एक चमत्कार हौ